ရန်းဂနစ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဝေခွဲမရ ဖြစ်နေမိတဲ့ အချက်ကို ထုတ်ပြော ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ပေါလ် စခိုးလ် - xyznews.co
ရန်းဂနစ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဝေခွဲမရ ဖြစ်နေမိတဲ့ အချက်ကို ထုတ်ပြော ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ပေါလ် စခိုးလ်
ယူနိုက်တက် ဂန္တဝင် ပေါလ် စခိုးလ် က အသင်းဟောင်းမှ ယာယီ နည်းပြသစ် အဖြစ် ရဲ့လ်ဖ် ရန်းဂနစ် ကို ရာသီကုန်် အထိ ခေါ်ယူလိုက်ခြင်း အပေါ် ဝေခွဲမရ ဖြစ်မိကြောင််း ဝေဖန်စကား ဆိုသွားခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ မနေ့ညက အီတီဟတ် ကွင်းထဲမှာ မြို့ခံ ပြိုင်ဖက် မန်စီးတီး အသင်းနဲ့ မန်ချက်စတာ ဒါဘီ ပွဲစဥ် ကစားခဲ့ရပြီး ဒီဘရိုင်း ၊ မာရက်ဇ် တို့ရဲ့ သွင်းဂိုး2ဂိုးစီ သွင်းယူမှုကြောင့်4– 1 ဆိုတဲ့ရလဒ်် နဲ့ ရှုံးနိမ့် သွားခဲ့ရပါတယ် ။
အဆိုပါ ရလဒ်ကြောင့် ယူနိုက်တက်တို့ဟာ မိမိ အသင်းထက်3ပွဲ လျော့ကစားထားခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ် အသင်းရဲ့အောက် တစ်မှတ်အကွာ အဆင့်5 နေရာကို ရောက်ရှိသွားခဲ့ရပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့် အခုပွဲက ယူနိုက်တက် အတွက် ဆိုးရွားလွန်းတဲ့ပွဲ ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ် ။
ဒီပွဲစဥ်ရဲ့ ပထမပိုင်းမှာတော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းရဲ့ ကစားပုံ ပြိုင်ဖက် အသင်းကို အနည်းနဲ့အများ အလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသေးတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ဒုတိယပိုင်း နဲ့ ပွဲစဥ် ပြီးဆုံးခါနီး 15 မိနစ်တာ အချိန်တွေကတော့ စိတ်ပျက်စရာ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် ။
အဆိုပါ မိနစ်အတွင်း ယူနိုက်တက်တို့ ဘောလုံး ပိုင်ဆိုင်မှု 8 % သာ ရယူနိုင်ခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ပေါလ် စခိုးလ် က အခုလို ရလဒ်ထွက်ပေါ်ခြင်းအပေါ် အံ့သြမှုမရှိပဲ ဆိုးလ်ရှားရဲ့ နေရာအတွက် ရန်းဂနစ်ကို ခေါ်ယူခြင်းအပေါ် စိတ််ပျက်ကြောင်း ဖွင့်ဟခဲ့လိုက်ပါတယ် ။
” ငါတို့ ဘာ မျှော်လင့်လို့ ရလဲ ? ကျွန်တော်တို့က ထိပ်တန််း အသင်းကြီး တစ်သင်းကိုတောင် ကိုင်တွယ်ဖူးခြင်း မရှိခဲ့တဲ့ နည်းပြမျိုးကို ယာယီ နည်းပြ အဖြစ် ခေါ်ယူခဲ့ကြပါတယ် ။ သူဟာ အသင်းကြီး တစ်သင်းကို ကိုင်တွယ် နည်းပြဖူးသူ မဟုတ်ရပါဘူး ”
” သူဟာ ဘောလုံး ကလပ်ကြီး တစ်ခုကို ကိုင်တွယ်ခြင်း မရှိခဲ့ဖူးသူပါ ။ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်မှာက မျှော်လင့်ချက်တွေ ကြီးမားလွန်းတယ်လေ ။ ခင်ဗျား ဘယ်အသင််းနဲ့ ယှဥ်ပြိုင်နေလဲဆိုတာ အရေးမကြီးပါဘူး ။ သူက ထိပ််တန်း အသင်း တစ်သင်းကိုမှ မကိုင်တွယ်ဖူးသူပါ ”
” ပြီးတော့ သူဟာ 10 နှစ်လောက်နေမှ အသင်းတစ်သင်းကို2နှစ်လောက် ကိုင်တွယ် နည်းပြခဲ့တာပါ ။ အဲ့လိုအနေ အထား တစ်ရပ်မှာ သူဟာ အသင်းအတွက် မှန်ကန်တဲ့ နည််းပြမျိုး ဖြစ်တယ်လို့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင််းက ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာလဲ ? အဲ့တာက ကျွန်တော့်ကို ဝေခွဲမရ ဖြစ်စေပါတယ် ”
” ကစားသမားတွေကို ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်း ကွင်းထဲမှာ ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ကြပါတယ် ။ ပထမဆုံး မိနစ် 20 အတွင်းမှာတော့ သူတို့ကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တော် အံ့သြမိခဲ့ပါတယ် ။ သူတို့ရဲ့ ကစားပုံ တကယ်ပဲ ကောင်းမွန်ခဲ့တယ်လေ ။ သူတို့ ဘောလုံးကို သက်သောင့်သက်သာ ကိုင်ပြီး ကစားနိုင်ခဲ့ကြပါတယ် ”
” ပေါ့ဂ်ဘာကို တိုက်စစ်ပိုင်း ကစားတာမျိုး မြင်တွေ့ခဲ့ရတာ တကယ့်ကို ကောင်းခဲ့ပါတယ် ။ သူ့ကို လူစားလဲတာက ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပါတ်တွေ အတွင်းမှာ တကယ်ပဲ အလုပ််ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် ပြောတာကို အထင််မလွဲလိုက်ပါနဲ့ ၊ ဒါက လျော့တိလျော့ရဲ ဖြစ်နေတဲ့ အသင််းမျိုး ဖြစ်နေပါပြီ ” လို့ ပေါလ် စခိုးလ် က ပြောခဲ့လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
Previous Article ပင်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ်ရောက်ရင် Panenka ပုံစံနဲ့ သွင်းပြမယ်လို့ ကြိုပြောခဲ့ပေမယ့် ၊ ဒီယက်ဇ် က မယုံခဲ့ပါဘူး #ဖာဘင်ဟို
Next Article ကြားရက်မှာ ကစားသွားရမယ့် ချန်ပီယံလိဂ် ၁၆ သင်း ရှုံးထွက်အဆင့် ဒုကျော့ ပွဲစဉ်တွေအတွက် မိုက်ကယ်အို၀င်ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်များ